Umlando wethu - Ningbo Abadayisi Union Imp & Exp Co., Ltd.
Umthengisi Union Union
Isungulwe ngo-1997, iphethe inzalo yokulawula izinkampani ezingaphansi kuka-14
★ 1997 Abathengisi Union ubhalisa futhi umisa e Ningbo Free Trade Zone
Union Abathengisi Union babhalisa futhi basungula eNingbo Free Trade Zone kanti inhlokodolobha ebhalisiwe yi-1.5 millon yuan.
Are Kunabantu abayi-7 eqenjini labasunguli, kufaka phakathi uMnu uPatrick Xu noNks uRainbow Wang.
Exp Ikhulukazi ithumela imikhiqizo yepulasitiki yasendlini efana nekhethini lokugeza, indwangu yetafula njalonjalo.
★ 1999 Siguqulela isithekelisi sokuqala ngempahla ejwayelekile e-Ningbo
♦ I-Sellers Union inenzuzo engaphezu kwama-millon angu-10 amadola aseMelika.
Omes Uba yiphayona embonini ejwayelekile yokuthengiswa kwempahla.
Isungula ihhovisi lokuthenga e-Yiwu, esifundazweni saseZhejiang.
★ 2000 Isungula isikhungo somkhiqizo wombukiso we-1000m² e-Ningbo
♦ I-Sellers Union inenzuzo yama-millon angu-12 amadola ase-US futhi ihlonishwa njengesiqu senkampani ehamba phambili yezohwebo lwangaphandle endaweni eboshiwe.
♦ Izimpi e-Ningbo Convention and Exhibition Center Building.
★ 2001 Iqoqwana lokuqala lebhizinisi elizimele lithole ilungelo elilawulwayo lokungenisa nokuthumela ngaphakathi elizweni
Union I-Sellers Union yaba yiqoqo lokuqala lamabhizinisi azimele athola ilungelo elizilawulayo lokungenisa-ukuthekelisa kwelungelo lokungenisa-ukuthekelisa endaweni eboshiwe.
Amount Inani layo lokuthengisa eliziphathela ngokwalo lidlule izigidi eziyi-15 zamadola.
★ 2004 Yakhiwe futhi yaphatha isikhungo se-logistics sokusatshalaliswa nokugcinwa ku-Ningbo
♦ Inani lokuthumela nokungenisa elizuzwe yi-Sellers Union ne-Market Union lidlule ama-dollar ayizigidi ezingama-40.
Was Isikhungo sokusabalalisa nokugcina sakhiwe futhi saphathwa eNingbo.
★ 2006 Abaphakeli be-VIP bafinyelele ku-1000, inani eliphelele lemikhiqizo lifinyelele ku-50,000
♦ Inani lokuthumela nokungenisa elizuzwe yi-Sellers Union, i-Market Union, i-Global Union kanye ne-Union Source lidlule izigidi eziyi-100 zamadola.
♦ I-Union Chance yasungulwa e-Yiwu.
Was Kwavulwa ihholo lombukiso womkhiqizo kanye nesikhungo sokusetshenziswa kwezimpahla zokusatshalaliswa nokugcinwa.
Markets Izimakethe zethu zomhlaba zifinyelele emazweni angama-60.
★ 2007 Top 50 e Service Industry, Ningbo Okuthembekile Import and Export Enterprise
Office Ihhovisi le-Yiwu lithuthele esakhiweni esisha esinendawo engamamitha-skwele angama-4,000.
★ 2008 Top 50 e Service Industry, Ningbo Okuthembekile Import and Export Enterprise
Enter Amabhizinisi aphezulu angama-100 eNingbo,
♦ Amabhizinisi aphezulu ayi-100 eZhejiang embonini yezinsizakalo
Enter Amabhizinisi aphezulu angama-500 embonini yesevisi yaseChina
♦ Inkampani yephini likasihlalo weNingbo Foreign Trade Enterprises
♦ Abasebenzi bangabantu abangaphezu kuka-300
♦ Iqembu linikele ngaphezu Izigidi ezingama-30 ezindaweni ezikhungethwe ukuzamazama komhlaba eWenchuan
♦ Uthole umklomelo we "Charity Company".
★ 2010 Sellers Union Group yasungulwa, ukuthekelisa nokungenisa kudlula izigidi ezingama-200 zamadola
Export Ukuthekelisa nokungenisa kudlule izigidi ezingama-200 zamadola, izimakethe zomhlaba zifinyelele emazweni angama-120, abahlinzeki be-VIP bafinyelela ku-2000, futhi inani eliphelele lemikhiqizo lifinyelele ngaphezu kuka-100,000.
♦ Bulid entsha umkhiqizo embukisweni isikhungo e Ningbo, mayelana 4000㎡.
♦ Omunye wabaninimasheya we-Ningbo Huajian venture investment co., LTD., Inhloko-dolobha ebhalisiwe ingu-yuan wezigidi eziyi-100.
★ 2012 Okuqhubekayo ohlwini Ningbo phezulu 108 yokungenisa kanye ukuthekelisa amabhizinisi
Were IShantou Operation Center yasungulwa.
Indawo yokusebenza kwe-Yiwu logistics warehouse ikhula ibe yi-20000㎡.
Ukuzuza iziqu ze- “AA-isigaba ephethwe ibhizinisi”.
♦ Ikhethwe njengebhizinisi lomshayeli lokuphathwa kokuthengiswa kwempahla emazweni angaphandle.
♦ Abadayisi Union Won isihloko amafemu owaziwa esifundazweni zhejiang.
★ 2013 Iphini likaNdunankulu waseChina uWang Yang wavakashela futhi waqamba kabusha eqenjini lethu
♦ Inani labasebenzi lifike ku-1000
monthly Inani lokungenisa nokuthekelisa lanyanga zonke lifinyelele kwizigidi ezingama-58 zamadola aseMelika kwathi izigidi ezingama-520 kwaba inzuzo yonyaka wonke.
♦ Isikhungo Sokusebenza se-Yiwu sathuthelwa esakhiweni sehhovisi lomndeni ongabodwa esingu-20 000
♦ Ekhethwe njengelungu lephini likasihlalo emkhandlwini wesihlanu wegumbi lezentengiselwano lamazwe omhlaba futhi njengelungu likasihlalo e-Ningbo.
♦ Inesihloko esithi "Ningbo Advantageous Headquarter Enterprise", "Ningbo Foreign Trade Key Enterprise", "Amabhizinisi aphezulu ayi-10 akhulayo embonini yensizakalo", "iyunithi ethuthukile ebhizinisini elihambisanayo".
♦ Umthengisi Union waklonyeliswa nge "ibhizinisi lokuphayona ekuthuthukisweni kwezebhizinisi langaphandle", "uphawu lweZhejiang lokuthekelisa" kanye "neNingbo ibhizinisi lokuhweba langaphandle elinenzuzo".
Ab Sungula "Abathengisi Union Love Foundation"
★ 2014 zibalwa njengoba 37 ka Ningbo Phezulu 50 Private Enterprise, nge dolobha ababhalisiwe RMB million 200
Born Uchungechunge lwezinsizakalo ezintsha ezifana ne-Bestore (i-cross-border e-commerce), i-Port kuya ePort (i-international cargo agent), i-U Trade (insizakalo ejwayelekile yomhlaba wonke) njalonjalo, izalwa. Isimo semisebenzi yokuhweba yamazwe omhlaba sibekiwe.
♦ Sivakashelwe izithunywa eziphezulu zikahulumeni wezangaphandle izikhathi eziningana.
♦ Siklonyeliswa ngeYunithi Yezinkontileka Nezivumelwano Zokuhlonishwa, Umkhiqizo Ophambili Wokuthekelisa WaseChina, Abanikazi Bezamabhizinisi Abaphezulu Abayi-10.
★ 2015 Ukunwetshwa kochungechunge lwensizakalo yokuhweba kwamanye amazwe, kuklonyeliswe abaqashi abaphezulu be-10 baseNingbo
♦ Siphinde sakhulisa iketango lezinsizakalo zokuhweba kwamanye amazwe sakhulula ipulatifomu yeSellersunion Online, engabonisa ngemikhiqizo eku-inthanethi yamakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe, yamisa i-U Tour Trip, enganikeza insizakalo ejwayelekile yokuhweba kwamanye amazwe nesevisi yohambo.
♦ Intuthuko ekwakhiweni kweqembu iqukethe ukusungulwa kokuPhathwa Kobungozi, Imikhiqizo eku-inthanethi nokukhishwa kwe-IT.
★ 2016 Inzuzo yebhizinisi ekuthumeleni ikhuphuka ngokuqinile. Kwasungulwa izinkampani ezimbili ezintsha zamagatsha
Sikhulise ibhizinisi lokungenisa iB2C futhi saba ngomunye wabaninimasheya abakhulu beYYQUGOU neYYLEGOU.
♦ Ally noZhejiang Saibole, inkampani esohlwini Yunsheng Corp., idolobha umkhakha-umhlahlandlela isikhwama, Abathengisi Union Group isungule iSaiyun isisekelo sokutshala amaphrojekthi asezingeni eliphezulu asendaweni e-Ningbo. Isisekelo sitshale imali ngempumelelo ifilimu yesikrini "Umndeni Ohlekisayo" kusho ukuthi Abadayisi Inyunyana isethe isinyathelo esisha sokutshala imali emikhakheni emisha.
♦ Abadayisi Union Group futhi zibalwa ku "Ningbo Top 50 Enterprises Private zonyaka", uqhubeke ubambe udumo "Yiwu Best Umqashi konyaka" futhi waba "umlingani amasu" of Sinosure Ningbo.
★ 2017 Two-way ukuthuthukiswa okuthengiswayo jikelele kanye nemikhiqizo ezikhethekile uchungechunge
♦ Ukwanda okuphawulekayo kwe-e-commerce ewela imingcele, ukuhanjiswa kwempahla yamazwe omhlaba kanye nezokuvakasha ezenziwe ngokwezifiso
♦ Ukutshalwa kwezimali ku-UMS, okuxhumanisa nendawo yesevisi
Completed Iqede ukwakhiwa kwesikhulumi se-Sellers Union Online, ngokungena kwabahlinzeki be-15,000, imikhiqizo ye-500,000 kanye namakhasimende angaphandle kwe-2,000.
♦ Ukubambisana neNingbo Education Bureau ukwenza i-'Public Welfare Project for Sellers University International and Hong Kong, Macao neTaiwan Student Cultural Exchange 'ukuxhasa izinkulungwane zabafundi bamazwe omhlaba ukuvakashela amadolobha omlando namasiko aseChina.
Imali engenayo yokusebenza yonyaka we-2019 idlule ama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezine, egcina ukukhula kwamadijithi amabili
♦ Kufakazelwe ukukhula okungaguquki kwempahla yabathengi yansuku zonke, kwajulisa ukuthuthukiswa kokukhiqizwa kwemikhiqizo yobungcweti, kwazuza ukukhula okuphawulekayo ebhizinisini lokuthumela impahla ngaphandle kwe-e-commerce; i-ecosystem kufaka phakathi izinto zomhlaba wonke, ezokuvakasha, umbukiso waba namandla.
Ishintshe futhi yathuthukisa inqubo yabalingani bebhizinisi, futhi yahlela abalingani bebhizinisi abangaphezu kwekhulu ukuba babe nezinkambo zokufunda eJapan naseJalimane.
Explo Kuhlolisiswe ukukhishwa kokuphathwa, kutshalwe ekuphathweni kwe-Yiwu Weisina Imp & Exp Co, Ltd, i-Ningbo Auland Imp & Exp Co., Ltd, ne-Ningbo Paramont Imp & Exp Co., Ltd, yasungula i-Hangzhou Union Deco Imp & Exp Co., Ltd.
Singumlingani wakho we-realibe eChina
Providing professional one stop buying export service for clients worldwide. Start Win-Win Cooperation.